Shina plastika vita amin'ny makiazy extruding milina sy mpanamboatra | Zhuoya
Antsoinay ihany koa ity milina fanoratana boribory vita amin'ny plastika ity ho toy ny extruder ny fibre borosy, ny milina boribory, ny famokarana boribory ny tany sns .. Ny tsipika fanaovana filim-borona dia afaka mamokatra PET, PP, PE monofilament amin'ny fanaovana karazana plastika isan-karazany toy ny fanadiovana ny gorodona. fanadiovana akanjo, borosy poleta, borosy Toliet sns ... Azontsika atao ny mampiasa fitaovana miverina fodiana mba hamokarana filam-bidy avo lenta miaraka amin'ny fanohanana ny teknolojia, koa ny fantsin-tsika dia raisin'ireo mpanjifa eran'izao tontolo izao.
Araka ny takian'ny mpanjifa samihafa dia manome ny tsipika famokarana filamatra vita amin'ny plastika namboarina izahay toy ny fampahalalana eo ambany.
>> Parameter modely
Modely Gearbox 200 200 200
Masinina lehibe 18.5kw 22 / 30kw 30 / 37kw
Fahaiza-manao (kgs / h) 80-100kgs 100-120kgs 120-140kgs
Miorina Dia. 200 200 200
Lisitry ny fanamafisam-peo General Machine
Single sakotra extruder
Maty loha + spinnerets
Rafitry ny calibration rano
Rano mafana mafana
1. Fanamboarana tsipika milina namboarina miankina amin'ny takian'ny mpanjifa.
2. Famolavola milina azo antoka ho an'ny mpanjifa faritra samihafa.
3. Fanohanana teknolojia mavitrika amin'ny fanamafisana filam-boto avo lenta.
4. Ireo fitaovana vita amin'ny kitay voakodia dia averina hampihena ny vidin'ny famokarana.
5. Serivisy tokana mba hahazoana antoka tsara anao.
6. Ny serivisy aorian'ny fivarotana feno dia hamaha ny fanontaniana amin'ny fotoana voafetra
Fitaovana fanadiovana gorodona, borosy fanadiovana lamba, fanadiovana fitafiana, borosy fanadiovana fiara, voankazo & fanadiovana legioma, fanadiovana kiraro, borosy tavoahangy ronono, borosy fanadiovana, borosy boribory, borosy fandroana, borosy fanala ny oram-panala sns.
>> Masinina fanosotra filamatra vita amin'ny plastika
Previous: Plastika vita amin'ny tady plastika
Manaraka: Plastika mitana fanamoriana plastika plastika
Q: Mpanao orinasa na mpivarotra orinasa ve ianao?
A: Mpanamboatra izahay.
Q: Azontsika atao ve ny mandefa santionany amin'ny fanamboarana ny tsipika milina?
A: Eny, hamolavola sy hanomezana milina namboarina arakaraka ny santionanao.
F: Azontsika tsidihina ve ny orinasanao raha te hahita ny tsipika famokarana mihazakazaka ianao?
A: Eny, afaka mandamina anao izahay hahita ny tsipika famokarana mihazakazaka mba hahatakatra tsara kokoa ny tsipika milina.
F: Raha manana olana amin'ny tsipika mihazakazaka isika, ahoana ny fomba hamahanantsika izany?
A: Manana politikam-pivarotana aorian'ny famarotana feno izahay izay hanampy anao hamaha ny olana ara-potoana.